ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခိုးသာခိုး … (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၇၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၄၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပုဂံမြေကို ကယ်တင်ပါ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရင်ကြားစေ့ပါရစေဗျာ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း okkw ရဲ့ မအားလပ်သူကြီး … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ တရားခံ … (မိုးမခ) ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့နေဆဲ …. (မိုးမခ) မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (မိုးမခ) မေ ၂၁၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (မိုးမခ) မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း okkw ရဲ့ တာဝန် (မိုးမခ) ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း okkw ရဲ့ ငါလွှတ်ပေးတာ သူတို့မသိ … (မိုးမခ) မတ်လ ၇၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ● စောင်းတွေသာ ပုံလာတယ် (မိုမးခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW – မလိုသေးရင် အသာနေ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈
ကာတွန်း OKKW ● မျှော်လင့်ချက်ကာလာစုံ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇
ကာတွန်း OKKW ● ပြန် … ကြား … ရေး …. (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၇